Ngaba kufuneka ndiqalise ukudibanisa isakhiwo kunye neenkcukacha zokuthumela i-website ye-backlink ngaphambi kokuba nantoni na?
Namhlanje, izinto eziphambili ze-off-page I-Search Engine Optimization ziye zaba yinkimbinkimbi kakhulu kunanoma iyiphi enye indlela ye-SEO kwiphepha.Enyanisweni, isakhiwo soqhagamshelwano lwezakhiwo (kubandakanywa nezenzo ezifunekayo ukungenisa iwebhusayithi kwi-backlinks) zihambelane ngqo kwi-SEO ye-off-page, njengenxalenye ebalulekileyo ye-puzzle epheleleyo malunga ne-injini ye-injini kwizinga. Kuthetha ukuba yonke i-website okanye iblogi kufuneka ibe neprojekthi ephezulu ye-backlink eyinxaxheba ekukhuleni ngokubanzi ngokwakhiwa kwamagunya aphezulu, kunye nenjongo yokugqibela yokulawula i-Google SERPs. Ewe, isabelo seengonyama socwangciso lokwakha isiqhelo sisoloko sifuna ixesha elide, kwaye ngamanye amaxesha sinokufuna i-investment investment. Nangona kunjalo, ukuba nepropati edibeneyo yoqhagamshelwano ifanelekile ukwenza njalo, oko kuya kuhlala kuhlawulwa, ngokukodwa kwimbono yexesha elide.
I-Quick Win for your Building Link
. Ewe, ukuba unqwenela ukuhambisa i-website ye-backlinks okanye nokuba sele unayo yonke into ngaphandle kwendawo-into enhle kuwe! Kodwa oko kwakungeke kwanele ukunandipha i-kickstart enhle kwiprofayili yakho ye-backlink. Ngaba uke wazama zombini iinkcukacha zoshishino-zithile kunye neendawo zengingqi ukuba zithumele iwebhusayithi kwi-backlinks? Yaye ukuba usenqikaza iindlela zokuzama kuqala - zilapha. Ngezantsi ndiza kubhala uluhlu oluphezulu lwezakhiwo zokwakha ezinokukuhambisa ngokukhawuleza iziphumo ezinokulinganiswa kwi-SEO.
Izalathisi zorhwebo zengingqi
Akukho mfuneko yokuthetha ukuba ukusebenzisa iirejista zendawo ukuhambisa i-website ye-backlink mhlawumbi indlela eyona ndlela yokuqala ukuzakhela i-backlinks. Ukuba usebenza nalezi ziseko ezisusela kwixesha elide lokuqala emva kokuqalisa kwewebhusayithi yakho okanye iblogi - sele usuhamba ngendlela efanelekileyo. Unganqikazi ukuhlawula ixesha kunye nomzamo ukuqinisekisa ukuba ubhalisiwe kuzo zonke iinqununu zengingqi. Faka yonke ingcaciso ebalulekileyo, njengendawo yakho yeshishini, iiyure zokusebenza, ulwazi loqhagamshelwano, njl. Ngaloo ndlela, awuyi kuzuza kuphela i-backlink eyigugu kodwa ukuphucula ukubonakala kwakho kwe-intanethi kubaphenyi basekhaya, kunye nokusebenza kwakho jikelele kwishishini.
Masibhekane nayo - olu hlobo lwamaxwebhu oshishino lunokubonakala lukhuni, ngakumbi xa kuthelekiswa nolwahlulo oluqhelekileyo lwezoshishino. Nangona kunjalo, iikhomputha ezithile zoshishino akufanele zinyanzeliswe, njengoko ziyiyona ndlela efanelekileyo yokuqinisa isakhono sakho sokwakha isiqulatho xa iwebhusayithi yakho okanye iblogi iya kuphila. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba ukuthumela kule ngxelo kuya kuthatha ixesha elincinane, kodwa ungesabi. Ngokuqhelekileyo, uluhlu olunjalo luya kufuna ukuba uzalise inkqubo yobhaliso ngaphambi kokuba ungenise iwebhusayithi kwi-backlinks - kodwa zakho iingeniso ezibonakalayo zifanele yonke imizamo esetyenziswe ngaphandle, ngokuqinisekileyo.
Ukufuna amathuba okwakha izixhumanisi kunye neeleksi zewebhu, gcinani engqondweni ukuba kufuneka ube nolwazi lonke lwezoshishino oluhlanganisiweyo kwaye luhambelana ngokupheleleyo kunye nendawo yonke yeenkcukacha zoshishino ezibhalwe kwenye indawo KwiWebhu. Ngaphandle koko, unokujamelana neengxaki ezithile ukusuka kwicala leenjini ezinkulu zokukhangela, kwakunye nenkqubo yokwenza inkcazelo ngokufanelekileyo. Ekugqibeleni, sebenza ngokuqhubekayo kwaye uqiniseke ukuba uhlolisise kabini ukuba wena kwindawo efanelekileyo nendawo efanelekileyo phambi kokuba ugcwalise yonke inkqubo yokungeniswa ukuze ufumane ezo zinto zifanelekile emva Source .